ktmkhabar.com - किन तात्छ मोबाइल फोन? यी कुरा ख्याल गरौं
शुक्रबार, जेष्ठ ६ २०७९
गोकुल बास्कोटाको क्षेत्रमा एमालेको नमिठो हार, समाजवादीले निकाल्यो शानदार जित !
बालेनलाई मतगणनास्थलमा छिर्न रोक
स्थापितलाई एमालेकै मतदाताले पत्याएनन्, पाँचै वडामा वडाध्यक्षले जिते तर केशवले पाए आधा मात्र मत !
गठबन्धन कांग्रेस र माओवादीको मात्रै भएको नतिजाले देखायो, यो बिषयमा समिक्षा हुन्छ : झलनाथ
गगन थापाको निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस रित्तिँदै, काठमाडौँ ४ मा पर्ने सबैजसो वडामा हार्‍यो कांग्रेस !
धरानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङको लौरो चम्कियो, २१० मतको अग्रता !
बालेनले लगाएको भाइरल चस्माको बढ्यो नसोचेको माग, कत्ति छ बजार मूल्य ?
काठमाडौँको अर्को नगरपालिकामा उदायो सूर्य, निकाल्यो शानदार जित !
धरान लाहुरेको सहर बाट लौरोको सहरमा परिणत हुँदै, मुख्य दल भन्दा स्वतन्त्र हर्क साम्पाङ अगाडी…
आफ्नो मोवाइल सेट चार्ज गर्दा, गेम खेल्दा, इन्टरनेट चलाउदा वा कुनै हेभि एप चलाउदा तातेको महसुस पक्कै गर्नु भयो होला । यदि तपाईँको मोबाइल फोन सेट तात्छ भने यी उपायहरू गर्नु भयो भने तात्ने समस्यालाई कम गर्न सक्नुहुन्छ।
मोबाइलको केस वा कभर हटाउने
अधिकांश स्मार्टफोनमा तात्ने समस्या हुन्छ । त्यसमा तपाईँले मोवाइललाई सुरक्षित बनाउन लेदर वा अरू कुराबाट बनेको मोबाइल कभर वा केस लगाउनु भएको छ भने मोबाइलबाट आएको तापलाई बाहिर जान दिँदैन । जसको कारण तपाईँको मोबाइल सेट अझ बढी तात्छ । त्यसैले मोबाइल सेटमा तात्ने समस्या छ भने यस्ता कुरालाई हटाउनु राम्रो हुन्छ ।
मोबाइललाई सतहमा चार्ज गर्ने
हामी मध्ये धेरैले मोबाइल चार्ज ओछयान, सोफा आदि माथि राखेर गर्ने गर्छौ । यसले मोबाइल चार्ज गर्दा निस्किएको तातोलाई त्यही राख्छ र मोबाइल बढी तात्छ । यदि तातो नसर्ने काठ वा सम्म परेको भागमा राखेर चार्ज गर्दा तात्ने समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ ।
लामो समय चार्ज नगर्ने
हामी दिनभर मोबाइल सेटलाई प्रयोग गर्छौ र राती सुत्ने बेलामा चार्जमा राखेर सुत्छौ । मोबाइल फोन सरदर १ देखि डेढ घन्टा भित्र चार्ज हुन्छ । त्यसैले रातभर चार्ज गर्दा ब्याट्रीको चार्जिङ क्षमतामा ह्रास आउनुका साथै अत्यधिक चार्जले विष्फोट पनि हुनसक्छ । त्यसैले सधै निश्चित समयमा मात्र चार्ज गर्ने गर्नुपर्छ ।
हेभि एप्सलाई बन्द गरौं
तपाईँले एक पटक चलाएको कुनै पनि एपलाई तपाईँले स्क्रिनमा देख्नुभएन भने तपाईँले त्यो बन्द भएको ठान्नुहुन्छ । तर त्यो एप ब्याकग्राउण्डमा चलिरहेको हुन्छ । त्यसैले यस्ता एपहरुलाई होम कि थिचेर हटाउने गर्नु पर्छ । हेभि ग्राफिक्स भएका एपहरु लामो समय चलाउँदा त्यसले प्रोसेसिङ पावर बढी लिएको कारण मोवाइल सेट तात्ने समस्या हुन्छ ।
घाममा धेरै नदेखाउने
मोबाइलमा तात्ने समस्या धेरै छ भने त्यस्ता सेटहरुलाई घाममा कमै प्रयोग गर्नु पर्छ । घामको रापले सेट तात्छ भने मोबाइललाई केसमा राखेको छ भने मोबाइलबाट आएको तातोलाई रोकेर थप तताउने गर्छ ।
थर्ड पार्टीको सामान प्रयोग नगर्ने
मोबाइल सेट किन्दा आएको ब्याट्री र सोहीमा आएको चार्जरले मात्र त्यो मोबाइललाई चार्ज गर्ने गर्नुपर्छ । यदि आफ्नो चार्जर हरायो वा ब्याट्रीको लाइफ सकियो भने आधिकारिक बिक्रेताबाट आफ्नो सेटलाई भनेर निर्माण गरिएको ब्याट्री र चार्जर प्रयोग गर्दा पनि मोबाइल सेट तातिने समस्या कम हुन्छ ।
बिभिन्न पत्रपत्रीकाको सहयोगमा
गगनको केही लागेन, अन्ततः एमाले उम्मेदवारले नै मारे बाजी !
काठमाडौँबाट एमालेले खाता खोल्यो
बालेन शाहलाई खुला पत्र